GTT International - Genève: GTT International-Genève: Hafatra ho an’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo
GTT International-Genève: Hafatra ho an’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo
Tonga ny fotoana hiarovana ny Taranaka
Fanampiana ara-bola avy any ivelany: Tsy azo ekena ho trosa hianjady amintsika sy ny taranaka !
Efa 2 volana mahery izao no vita ny fifidianana izay tsy nifaneken'ny rehetra noho ny sandoka sy tery vay manta natao tamintsika. Kanefa iaraha-mahita fa tsy miroso any amin’ny làlana tokony izorany ny Firenena. Mbola krizy politika hatrany no mitohy raha jerena ny zava-mitranga tato ho ato. Efa nampoizina mihitsy izao fizotran-javatra izao noho ny famolavolana fifidianana kitoatoa ho an’ny Malagasy izay notohanan'ny ny Fianakaviambe Iraisampirenena.
Hita soritra fa sarotra sy tsy mazava ny fampiharana ny Lalam-panorenena, izay tsy nifanekena fa notefen'ny FAT irery tamin’ny 2010, ary hita fa mikatso sahady ny fanendrena Praiminisitra, izay asa voalohany tokony tontosain' Atoa Rajaonarimampianina. Ny vokany dia mitohy ny governemanta tetezamita tarihin’Atoa Beriziky satria nisafidy ny haka fotoana maharitra Atoa Rajaonarimampianina.
Nisy ihany ny fanendrena natao teo anivon’ny andrim-panjakana sasany kanefa toa tapi-maso fandrebirebena sy fampatoriana ny Malagasy fotsiny izany. Manjaka hatrany ny kitranoantrano. Ireo mpitondra sasany vao notendrena dia mpiara-nandray anjara mivantana na ankolaka tamin’ny fanonganam-panjakana avokoa. Anisan'izany:
· Atoa Jean-Eric Rakotoarisoa, mpahay lalàna sady mpanentana mivantana ao amin’ny SEFAFI (Sehatra Fanaraha-mason’ny Fiainam-pirenena). Ny fanendrena azy ao amin’ny HCC dia nolavin'ny vondron'ny mpitsara. Ary Voalaza ombieny ihany koa fa anisan’ny mpiray tsikombakomba tamin’ny mpanongam-panjakana tamin’ny 2009 io SEFAFI io.
Atoa James Andrianalisoa, mpanolotsaina manokan’Atoa Rajaonarimampianina, izay marihana fa mbola filohan’ny filan-kevim-pitondran’I Air Madagascar (Président du Conseil d’Administration). Raha todihana ny lasan’Atoa Andrianalisoa talohan’izao fanendrena azy ho tale jeneralin’I ACM izao, dia tokony handalo fitsarana izy.
Atoa Ny Hasina Andriamanjato, izay voatendry ho PDS Antananarivo. Anisan’ireo nandray anjara tamin’ny famonoan’olona tamin’ny 26 janoary sy 07 febroary 2009 ny tenany 
Raha bangoina dia resaka fanodinana sy fandrebirebena saim-bahoaka no ataon’ireo eo amin’ny fitondrana amin’izao fotoana, mba ialany amin’ny fanatanterahana ireo asa tokony atao rehetra ampiverina ny fitoniana ary voalaza ao amin’ny tondrozotra, indrindra ireto manaraka ireto:
Tsy mbola tafaverina ao an-Tanindrazana hatramin’izao ireo sesi-tany noho ny antony ara-politika, anisan’izany ny Filoha Ravalomanana. Vao mainka aza miantsy ady Atoa Randrianasolo (Mpitsara ambony – Procureur général) izay nanambara fa “hosamborina Atoa Ravalomanana raha vao miverina an-Tanindrazana”. Mifanipaka tanteraka amin’ny fitoniana dradrain’Atoa Rajaonarimampianina ombieny ombieny izany!
Ireo gadra politika dia mbola any amponja,
Tsy mbola misy mivoha ireo haino aman-jery nakaton’ny fitondrana Rajoelina,
Tsy misy fanehoan-kevitra malalaka, ny fampahalalam-baovao dia voageja. Vao mainka aza nanamafy ny Filankevitry ny Ministra (27/02/2014) fa ho enjehina izay mpanao gazety sahy mitsikera,
Mitohy hatrany ireo halatra sy fanodinkodinana ary fandrobana ny harem-pirenena. Vao tsy ela, dia nisy sambo tanzaniana nahatratrarana andramena an-taoniny maro tany amin’ny faritra atsinanan’ny Nosy. Nanjavona ihany koa ny vola mitentina 230 miliara Ariary izay an’ny Banky Foibe, kanefa dia tsy narahana famotorana akory. Torak’izany koa, ny vola 100 miliara Ariary lanin’Atoa Rajaonarimampianina tamin’ny fampielezan-kevitra dia tsy nisy fanadihadiana,
Manjaka ny tsy fandriampahalemana, ary mihazo ny any ambanivohitra izany ankehitriny ka mahatonga ny tantsaha mihitsy hangataka fahazoan-dàlana hitam-basy hiarovany ny tenany.
Mbola ireo mpanongam-panjakana daholo ihany no eo amin’ny fitondrana, ary vao mainka aza nahazo hery ry zareo satria “voadio” ny heloka bevava nataony sady azony ihany koa ny fankatoavan’ireo Fianakaviambe Iraisam-pirenena taorian’ny fifidianana sandoka sy feno hala-bato. Fantatra ihany koa fa mbola “masi-mandidy” foana Atoa Ratsirahonana satria lasa mpanolo-tsainan’Atoa Rajaonarimampianina indray izy amin’izao fotoana.
Manoloana ireo zava-misy ireo, dia ny Fianakaviambe Iraisampirenena, izay nanery ny Malagasy hanao fifidiana sandoka, feno halatra sy hosoka, no tsy manao ny asany. Ho gaga ve isika raha tsy misy ny fiovàna?
Mandalo fotoan-tsarotra hatrany ny Firenena,kanefa tsy afaka ny ho kivy isika vahoaka Malagasy fa zo sy adidy hoan'ny taranaka fara-mandimby ny fiarovana ny harem-pirenena.
Koa, manainga antsika vahoaka Malagasy hijoro ka tsy hanaiky mora foana ny fandrobàna sy ny varo-boba atao amin’ny Tanindrazantsika. Tokony ho saro-piaro ihany koa isika amin’ny harem-pirenentsika sy izay hiafaran’ny Taranaka.
Tsy azo ekena ny famatsiam-bola avy any ivelany raha tsy misy fanaraha-maso mazava sy hentitra mba handeha any amin’ny tokony alehany ny vola. Tsy ny vahoaka Malagasy izay efa ao anatin’ny fahantrana lalina indray no voatery mbola hamerina ny vola tsy nampiasainy.
Tsy tokony hanaiky ho tompon’antoka velively amin’ny famerenana ny trosa tsy nampiasaina ny Firenena Malagasy sy ny taranaka faramandimby. Andraikitr’ireo mpitondra manodikodim-bola sy ny mpamatsy vola azy izany.
Aoka isika tsy hanaiky lembenana ary hijoro ho tena olom-pirenena !
Genève, 15 marsa 2014
 Raha ny marina dia 25% des Malagasy no nifidy an’Atoa Hery Rajaonarimampianina (2 tapitrisa amin’ny 8 tapitrisa mpifidy).
 Ny Tale jeneraly vaovaon’ny ACM (Tale jeneralin’i Air Mad taloha), naman’Atoa Rajaonarimampianina (izay marihana fa Filohan’ny CA Air Mad), dia sesi-tany tany Frantsa. Nahazo baikom-pisamborana na « mandat d’arrêt international » tamin’izany fandosirany izany izy. Nokaramain’ny fitondrana tetezamita vola tsy toko tsy forohina ny tenany tamin’ny 2012 hanarina ny Kaompaniam-pitanterana, kanefa tsy nisy vokany nivaingana akory.
 Madagasikara dia faha-88 (amin’ny firenena miisa 179, aorian’i Niger sy Burkina Faso) amin’ny filaharana eran-tany mombq ny fahalalahana eo amin’ny sehatry ny fampahalalam-baovao (Filaharana nataon’ny RSF)